Vaovao - Terminolojia sy fahalalana mifandraika amin'izany
Terminolojia Air compressor sy fahalalana mifandraika amin'izany
(1), tsindry: ny tsindry voalaza ao amin'ny orinasa compressor dia manondro ny tsindry (P)
Ⅰ, fanerena atmosfera mahazatra (ATM)
Ⅱ, fanerena miasa, suction, setroka tsindry, manondro ny rivotra compressor suction, setroka tsindry
① Ny fanerena refesina amin'ny tsindrin'ny atmosfera toy ny teboka aotra dia antsoina hoe fanerena amin'ny tany P(G).
② Ny tsindry amin'ny banga tanteraka amin'ny maha-teboka aotra dia antsoina hoe fanerena tanteraka P(A).
Ny fanerena setroka matetika omena eo amin'ny compressor nameplate dia ny fanerena gauge.
Ⅲ, fanerena samihafa, fahasamihafan'ny tsindry
Ⅳ, fahaverezan'ny fanerena: fatiantoka
Ⅴ, compressor rivotra, ny fiovam-po fanerena matetika ampiasaina:
1MPa (MPa) = 106Pa (PASCAL)
1bar (bar) = 0.1MPa
1atm (tsindrin'ny atmosfera mahazatra) = 1.013bar=0.1013MPa
Matetika amin'ny indostrian'ny compressor rivotra, ny "kg" dia manondro ny "bar".
(2), fikorianan'ny anarana: fikorianan'ny anarana ao Shina dia fantatra ihany koa amin'ny hoe fifindran'ny anarana na nameplate.
Amin'ny ankapobeny, eo ambanin'ny fanerena setroka ilaina, ny habetsaky ny entona avoakan'ny compressor rivotra isaky ny vanim-potoana dia miova ho amin'ny fanjakana intake, izay ny sandan'ny fanerena sy ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny dingana voalohany amin'ny sodina. Ny ora iray dia manondro iray minitra.
Izany hoe ny habetsahan'ny suction Q= CM *λ*D3*N=L/D*D3N
L: Halavan'ny rotor
D: Savaivony ny rotor
N: Ny hafainganam-pandehan'ny rotor
CM: Coefficient ny tsipika mombamomba
Lambda: halavan'ny savaivony
Araka ny fenitra nasionaly, ny tena habetsahan'ny setroka ny rivotra compressor dia ± 5% ny nominal mikoriana.
Toetran'ny fanondroana: tsindrin'ny atmosfera mahazatra, ny mari-pana 20 ℃, ny hamandoana dia 0 ℃, io fanjakana io any Etazonia, Grande-Bretagne, Aostralia ary firenena miteny anglisy hafa T = 15 ℃. Eoropa sy Japon T = 0 ℃.
Fepetra mahazatra: atmosfera iray mahazatra, mari-pana 0 ℃, hamandoana 0
Raha avadika ho fanjakana fototra, dia: m3/min (cubic isa-minitra)
Raha avadika ho fanjakana manara-penitra, dia: Nm3/min (efajoro mahazatra isa-minitra)
Aorian'ny 1 m/min = 1000 l/min
1 nm aorian'ny / min aorian'ny = 1,07 m / min
(3) Ny votoatin'ny solika amin'ny gazy:
Ⅰ, isaky ny vondrona volume ny rivotra voapoizina ao amin'ny menaka (anisan'izany ny menaka, poti mihantona sy ny etona solika), ny kalitaon'ny fiovam-po ho eny ny fanerena ny 0.1 MPa, ny mari-pana dia 20 ℃ sy ny hamandoana havany 65% ​​ny sandan'ny fenitra toetry ny atmosfera. Unite :mg/m3 (milaza ny sanda mpivady tanteraka)
Ⅱ, PPM dia nilaza fa ny votoaty trace ao amin'ny fifangaroan'ny marika, dia manondro ny isa isaky ny iray tapitrisa hetsy tapitrisa (lanja noho ny PPMw sy ny volume noho ny PPMv). (manondro ny ratio)
Matetika isika dia manondro ny PPM ho toy ny tahan'ny lanja. (Ny iray tapitrisa amin'ny kilao dia miligrama)
1PPMW =1.2mg/m3(Pa =0.1MPa, t=20℃, φ=65%)
(4) Hery manokana: ilazana ny hery lanin'ny fikorianan'ny compressor. Karazana fanondroana hanombanana ny fahombiazan'ny compressor eo ambanin'ny famatrarana entona mitovy sy ny tsindry entona mitovy.
Hery manokana = herin'aratra (herin'ny fidirana)/ setroka (kW/m3·min-1)
Herin'ny shaft: Ny hery ilaina amin'ny fampandehanana ny compressor.
P axis =√3×U×I× COS φ(9.5)×η(98%) maotera ×η fiara
(5), elektrika sy teny hafa
Ⅰ, hery: amin'izao fotoana izao isaky ny vondrona fotoana hanaovana ny asa (P), ny vondrona dia W (watt
Matetika izahay mampiasa kW (kilowatt), fa koa horsepower (HP)
1 KW HP1HP = 1,34102 = 0,7357 KW
Ⅱ, amin'izao fotoana izao: elektronika eo ambanin'ny hetsiky ny herin'ny herinaratra, misy ny fitsipika mihetsika amin'ny lalana iray
Rehefa mihetsika izy, dia mamorona courant A amin'ny A amperes.
Ⅲ, malefaka: satria fotsiny manana loha sy rano mikoriana, misy ihany koa ny mety ho fahasamihafana,
Antsoina hoe volt (U) izy io, ary V (volts) ny tarika.
Ⅳ, dingana, manondro ny tariby, dingana telo tariby efatra: manondro ny dingana telo kofehy (na tariby)
Ny tsipika afovoany (na tsipika aotra), dingana tokana dia manondro tsipika iray (na tsipika afo)
Root center line (na zero)
Ⅴ, matetika: alternating current (ac) hamita ny electromotive hery ny tsara sy ny ratsy fiovana tsingerin'ny isa faharoa, mampiasa (f), araka ny vondrona - Hertz (Hz) ny 50 Hz alternating matetika amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenentsika, any ivelany. ny 60Hz.
Ⅵ, matetika: hanova ny matetika, amin'ny rivotra compressor fampiharana, amin'ny alalan'ny fanovana ny matetika ny hery hanova ny hafainganam-pandehan'ny maotera, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fikorianan'ny ra fanitsiana. Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra dia azo amboarina amin'ny 0.1bar amin'ny fiovam-po matetika, izay mampihena be ny asa tsy miasa ary mahatratra ny tanjon'ny fitsitsiana angovo.
Ⅶ, controller: misy karazany roa lehibe ny fanaraha-maso amin'ny indostria: karazana fitaovana sy PL
System, mampiasa PLC controller, dia karazana by
Mpandrindra programmable ahitana microcomputer chip tokana sy singa hafa.
Ⅷ, ligy mahitsy: fifandraisana mivantana, ao amin'ny indostrian'ny compressor rivotra dia manondro ny mamatotra amin'ny coupling
Ⅸ, entana / fampidinana, ny toetry ny fiasan'ny rivotra compressor, amin'ny ankapobeny dia manondro ny rivotra compressor
Ny dingana feno amin'ny suction sy ny setroka dia ao amin'ny toetry ny entana, raha tsy izany dia ao amin'ny fanjakana fampidinana
Ⅹ, rivotra/rano: ilazana ny fomba fampangatsiahana
Ⅺ, tabataba: unit: dB (A) (+ 3) (dB) unit ny haavon'ny tsindry feo
Ⅻ, kilasy fiarovana: voalaza fa fitaovana elektrika tsy misy vovoka, misoroka vatana vahiny, tantera-drano, sns
Ny sandan'ny haavon'ny rivotra dia aseho amin'ny IPXX
Ⅷ, fomba fanombohana: fanombohana mivantana, matetika manomboka amin'ny fomba fiovan'ny telozoro kintana.
(6) Ando mari-pana vondrona ℃
Ny rivotra mando eo ambany fanerena fanerena toy izany, manao tany am-boalohany misy unsaturated etona rano eny amin'ny rivotra lasa tototry ny etona mari-pana, amin'ny teny hafa, rehefa nihena ho mari-pana sasany, ny hafanan'ny rivotra ao amin'ny rivotra misy unsaturated etona rano ho tonga saturation fanjakana ( izany hoe manomboka mi-liquefaction ny etona, mipoitra ny ranon-javatra), ny mari-pana dia ny maripanan'ny ando amin'ny entona.
Tendron'ny ando fanerena: ilazana ny entona misy fanerena sasany nangatsiaka tamin'ny mari-pana iray, ny etona rano tsy mahavoky ao anatiny dia lasa rotsak'orana feno rano, ny mari-pana dia ny teboka ando amin'ny entona.
Taonan'ny ando amin'ny atmosfera: amin'ny tsindrin'ny atmosfera mahazatra, ny gazy iray dia mangatsiaka ka tsy feno ny ao anatiny.
Ny etona rano dia lasa etona tototry ny rano mivoaka amin'ny hafanana
Ao amin'ny indostrian'ny compressor rivotra, ny ando dia ny haavon'ny fahamainan'ny entona